AFFORDABLE | 105 Degmo | BILAASH BANK xisaabta | XARUNTA BILAASH EE XARUNTA | Furitaanka Xisaabaadka Bangiga, Xisaabta Bangiga Dibadiisa Oo Furan
Xisaabta Bangiga Furan ee Wadamada 106 iyo 50-ka Mareykanka
Laga bilaabo $ 100
Midka ugu fiican iyo bixiyaha adeegga ugu weyn
Xisaabta bangiga caalamiga ahi waxay ka furaysaa kaalmo ku dhowaad dhammaan qaybaha adduunka
Sirta waa la hubo
Bangiga Shaqsi Acc. Bangiga Shirkadaha Acc.
Sida loo Furo Xisaabta Bangiga
Xeerarka caanka ah
Fadlan dooro bangiga aad doorbideyso oo noo soo dir macluumaadkaaga iyo Dukumiintiyadaada.
Diyaarinta Su'aalaha iyo dukumiintiyada loo baahan yahay inaad dib u fiiriso adiga iyo saraakiisha bangiga.
Saxeex dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah soo gudbinta. Xaalado kooban, fiidiyoow / shir ayaa lala yeelanayaa saraakiisha bangiga si loo dhammaystiro hawsha.
Ku raaxeyso adeegsiga koontadaada bangiga caalamiga ha ahaato mid gudaha ah ama mid caalami ah markii aad guulaysato.
Xulo Koontadaada Bangiga
[qiyaasta_form form_id = "36"]
Liiska-hubinta ee Shakhsiyaadka
Liiska Liiska Shirkadaha
Mudo waqti ah, Million Makers waxay dhiseen xiriir aad u xoogan oo ay la leeyihiin baananada caalamiga ah in kabadan 110 xukuno caalami ah.
Waxaan si xoogan u raacsanahay mabaadi'da "M Dar"
Qiimaynta Tartan, Hal Meel Dukaan, Adeeg Shakhsiyadeed, Hal Meel oo lagula Xiriiryo, Cagaha Caalamka, Tayo, Jaangooyn, Ogaanshaha Dhaqanka Gaarka ah, Talo-siinta Sameynta loo Sameeyay, Khibradda Wershadaha ee Xoogga leh iyo Qibrada Dhaqaalaha.
Habka furitaanka akoonnada bangiyada waxaa ka mid ah:
Dhameystirka foomka dalabka bangiga kaas oo markaa loo gudbiyo macmiilka si uu ula saxiixdo tilmaamaha loo baahan yahay.
Kadib, waxaan u dirnaa xirmada oo dhameystiran bangiga si loo ansaxiyo kama dambeysta.
Annaga, markaa, kormeerno hannaanka furitaanka koontada illaa inta waqtiga xisaabinta ay dhacayso oo xirmada baananka la helayo.
Dhammaan qiimayaasha ku taxan boggayaga internetka waxaa loogu talagalay oo keliya kaalmaynta habka furitaanka akoonnada bangiga iyo dalabka oo kuwanuna waa ajuuradeenna xirfadda keliya oo kharashyadaan ma dabooli doonaan wixii kharash bangi ah iyo guddiyado ku saabsan macaamil ganacsi ama dayactir koonto ama wixii kharash ah.
Dhamaan ajuuradayada xirfadeed waxaa loo xusey oo keliya shirkadaha waxqabadyada ganacsi ee aan u baahneyn shatiyeyn xirfadeed iyo sharciyeyn (tusaale ahaan haynta, ganacsiga, adeegyada ama shirkadaha guryaha, iwm.). Haddii shirkaddaada ay si uun ula macaamilayso dhaqaala lacageed dhinacyada saddexaad (tusaale ahaan jabsiga Forex, sinnaanta, maalgelinta wadajirka ah, iwm) ama shirkad kasta oo shati leh oo ay sharciyeysay hay'adda la aqoonsan yahay ee dawladda, fadlan nagala soo xiriir soo xigashada.
Bangiyadu waxay xaq u leeyihiin ikhtiyaar u gaar ah inay aqbalaan ama diidaan dalabyada si ay u furaan xisaab, sida sidan oo kale ah waxaan kuu baraynaa bangiga waxaanan kugu hagi doonaa habka geedi socodka furitaanka; hase yeeshe ma dammaanad qaadi karno in koontadaada uu oggolaan doono bangiga oo si guul leh loo furi doono.
Iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah awgeed, ma awoodi karno inaan gacan ka geysanno adeegga xisaabinta bangiga ee loogu talagalay muwaadiniinta waddamada soo socda, halkaan riix: FATF Wadamada Xayiray
info@millionmakers.com Ama wac Austria +43720883676, Armenia + 37495992288, Kanada +16479456704, Booland +48226022326, UK +442033184026, USA +19299992153
Nuqul aan Nootaayo ahayn oo ah baasaboorkaaga ansax ah
Baasaboorka waa in la saxeexo oo saxeexu waa inuu la mid ahaadaa saxeexa foomka dalabka. Sawirku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah oo tayadiisu wanaagsan tahay.
Nuqulka asalka ah ama La Xaqiijiyay ee biilka adeegsiga / bayaanka bangiga
(si loo xaqiijiyo cinwaanada la deggan yahay, oo aan ka badnayn 3 bilood). biilka korontada ee guriga (tusaale ahaan korontada, biyaha, gaaska, ama taleefanka xariiqa go'an laakiin aan ahayn biilka taleefanka gacanta, inta badan xukunka), haddii kale, waxaad sidoo kale bixin kartaa bayaan bangi, warqad kaarka deynta ah ama warqad tixraac bangiga ah (taariikheysan) in ka badan 3 bilood) caddeyn cinwaan ahaan.
Nuqulka asalka ah ama caddeynaya waraaqda tixraaca Bangiga
(taariikhdeedu kama badna 3 bilood). Ku dhawaad ​​dhammaan bangiyada adduunka oo dhan ayaa soo saaray "Warqad Tixraac ah". Waxaad si fudud uga codsan kartaa Warqadda tixraaca bangigaaga, halkaasoo aad ku leedahay xisaab. Warqadda tixraaca waa inay muujisaa xaqiijinta xiriirka muddada, Lambarka Akoonka, doorbidida dheelitirka sida maalintaas iyo sheegista "hawlgal xisaabeed si qancin ah".
Foom Codsi oo Buuxa oo Saxiixan
Dib u bilaw shaqsiyeed
Incase, dukumiintiyada la bixiyay oo aan ku qorneyn luuqadda Ingiriisiga, markaa markaa, waxaa loo baahan yahay tarjumaad la xaqiijiyay.
Mar haddii dukumiintiyada oo dhan ay diyaar yihiin fadlan u dir nuqullada jilicsan wakiilka si ay dib ugu eegaan, Aad ayey muhiim u tahay inaad siiso foomam (yada) si buuxda loo buuxiyo si looga fogaado daahitaanka howsha furitaanka.
Waxaa jira wadamo yar oo kaliya loo baahan yahay oo kaliya loo baahan yahay Koobi Baasaboor iyo Tarjumad Baasaboor.
Shaqaaleysiinta Furitaanka Xisaabaadka Bangiga Shirkadaha
Qayb dukumiintiyo shirkadeed sharci ah oo ka kooban:
Xusuus-qorka iyo Qodobbada Ururka, dukumiintiyo cadeynaya magacaabista agaasimeyaasha (s) agaasimeyaasha iyo xogheyaha (haddii ay jiraan), dukumiinti xaqiijinaya xafiiska diiwaangashan, Shahaadooyinka La Wadaaga, Shahaadada Joogtada Wanaagsan, haddii ay dhacdo, shirkadda ayaa ka badan 12 bilood.
Nadiifi Nuqulka Qaabdhismeedka Shirkadda, aqoonsashada milkiilaha (hayaasha) faa'iido doonka ah
Ruqsad ansax ah (haddii lagu dabaqi karo)
Agaasime kasta, saamile, xog-haye, saxeex la oggolaaday iyo milkiilaha ugu dambeeya ee faa'iidada leh:
Sarkaal kasta oo shirkadeed (Halka ay agaasimeyaasha shirkaddu ama saamilayduhu yihiin hay'adaha sharciga ah), fadlan bixi:
Nuqul ka mid ah dukumentiyada dastuuriga ah (Shahaadada Isku-duwaha, Maqaallada, iwm.).
Nuqul ka mid ah Diiwaangelinta Shirkadaha (oo ay ku jiraan Diiwaannada Saamilayda, Agaasimayaasha iyo Xoghaynta).
Qaab Dhismeedka Shirkadda.
Shahaadada Joogtada Wanaagsan.
Mar haddii dukumiintiyada oo dhan ay diyaar yihiin fadlan u dir nuqullada jilicsan wakiilka si ay dib ugu eegaan, Aad ayey muhiim u tahay inaad siiso foomam (yada) si buuxda loo buuxiyo si looga fogaado daahitaanka howsha furitaanka. Shirkadeena gebi ahaanba waxay ka soo horjeeddaa Lacag La'aanta, Ganacsiga Maandooriyaha, Argagixisadda iyo ka ganacsiga dadka, sidaa daraadeed, WAAN KU CAAWINNAYNAYO Macaamiisha noocaas ah.
Haddii aad sameyso dhaqdhaqaaq adiga oo aan haysan laysan lagaa rabo ama oggolaansho ay bixiyeen hay'ad laxiriirta, annaga oo ah Million Makers kaama caawin doonno adeegyada furitaanka akoonka bangiga ee la xiriira waxqabadka aan ruqsadda haysan.
Tusaalooyin yar oo ah nashaadyada shati-bixinta: Khamaarka, Khamaarka, Bakhtiya-nasiibka, Bixinta adeegyo maaliyadeed oo ku lug leh is-weydaarsiga / kala goynta ee sarrifka lacagaha qalaad, ganacsiga bangiga, ganacsiga caymiska, hawlgalka iyo maamulidda qorshayaasha maalgashiga wadajirka ah iyo maalgelinta wadaagga ah, agabyada maaliyadeed iyo badeecadaha ku saleysan iyo ilo kale, ayagoo siinaya talo maalgashi dadweynaha , adeegyada hawsha bixinta, sarrifka lacagaha, xawilaadda lacagta ama wax ururinta lacagta, maaraynta hantida iyo adeegyada haynta ee aaminka ah.
Fadlan nala soo xiriir, haddii aad u baahan tahay caawimaad kasta oo ku saabsan ruqsad siinta shatiyeynta maaliyadeed, Forex dilaalnimo ama shirkadda Khamaarka
Annagu ma taageerin mana siinno adeegyadeena hoos ku xusan noocyada (yada) ganacsiyada:
Dukaanka dukumiintiyada shirkada ama xirmo bangi loogu talagay macmiilku wuxuu u baahan yahay lacag dheeraad ah, sidaa darteed, si otomaatig ah ayaa loogu dari doonaa qaansheegta inta lagu jiro jeegareynta. Qiimaha dhoofinta ee adeegyada diridda caalamiga ayaa si otomaatig ah loo dejiyaa, sidaa darteed, 110 Doolar ayaa si otomaatik ah loogu darayaa gaadhiga.